China Steel ဝါယာကြိုးကြိုး သံမဏိကြိုး သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး 6×7+FC 6×19+FC 6×12+FC စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Bangyi
စတီးဝါယာကြိုးကြိုး သံမဏိကြိုး သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး ဖိုင်ဘာအူတိုင် 6×7+FC 6×19+FC 6×12+FC
Fiber Core သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးသည် သံမဏိကြိုး၏အလယ်တွင် ဖိုက်ဘာအူတိုင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။FC ကိုကိုယ်စားပြုသည်။သတ္တုအူတိုင်စတီးဝါယာကြိုးကြိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖိုက်ဘာအူတိုင်စတီးလ်ကြိုးများသည် ပျော့ပျောင်းမှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ဆီသိုလှောင်မှု ပိုများသော လက္ခဏာများရှိသည်။Fiber Core အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
Fiber Core သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုးသည် သံမဏိကြိုး၏အလယ်တွင် ဖိုက်ဘာအူတိုင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။FC ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သတ္တုအူတိုင်စတီးဝါယာကြိုးကြိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖိုက်ဘာအူတိုင်စတီးလ်ကြိုးများသည် ပျော့ပျောင်းမှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ဆီသိုလှောင်မှု ပိုများသော လက္ခဏာများရှိသည်။
Fiber core အမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ် : Natural fiber core နဲ့ Synthetic fiber core ။
သဘာဝ အူတိုင်စတီးဝိုင်ယာကြိုးများသည် ဂုန်လျှော်၊ နာနတ် အစရှိသော သဘာဝဖိုက်ဘာကြိုးများကို အသုံးပြုသည်။ ဤကြိုးအူတိုင်မျိုးတွင် ဆီသိုလှောင်မှု အများအပြားရှိပြီး သံမဏိဝိုင်ယာကြိုးသည် ပျော့ပျောင်းပြီး ချေးမတက်နိုင်ပါ။
Synthetic core စတီးလ်ကြိုးများသည် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများဖြစ်သည့် polyethylene၊ polypropylene၊ နိုင်လွန်စသည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဖိုက်ဘာ Core တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကြိုး Core သည် ဆီသိုလှောင်မှုနည်းပြီး သံမဏိဝိုင်ယာကြိုးသည် မာကျောပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Steel Core နှင့် Fiber Core အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း
1. တူညီသောအချင်းရှိ သံမဏိ အူတိုင်ဝိုင်ယာကြိုးသည် ဖိုက်ဘာအူတိုင်ဝိုင်ယာကြိုးထက် ပိုကြီးသော ကွဲထွက်စွမ်းအားရှိပြီး ၎င်းတွင်ထမ်းရသောဝန်မှာလည်း ပိုကြီးပါသည်။
2. သံမဏိအူတိုင် ဝါယာကြိုးကြိုးသည် ဖိုက်ဘာအူတိုင် ဝါယာကြိုးကြိုးထက် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ဖိအားခံနိုင်ရည် ပိုကောင်းသည်။သံမဏိအူတိုင်ဝိုင်ယာကြိုးသည် အလွှာပေါင်းများစွာ အကွေ့အကောက်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
3. Steel core ဝါယာကြိုးသည် အပူချိန်မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအရ ဖိုက်ဘာအူတိုင် ဝါယာကြိုးကြိုးထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။မြင့်မားသောအပူချိန်အခါသမယအတွက် Steel core ဝါယာကြိုးကို ယေဘူယျအားဖြင့် ရွေးချယ်သည်။
4. fiber core ဝါယာကြိုးကြိုးသည် သံမဏိအူတိုင် ဝါယာကြိုးကြိုးထက် ပိုပျော့သည်၊
5. ဖိုက်ဘာ-အူတိုင် စတီးလ်ကြိုး၏ ချောဆီသည် ဆီသိုလှောင်ရန်အတွက် သံမဏိ-အူတိုင် သံမဏိကြိုးကြိုးထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေး 6*7+FC၊6*19+FC၊ စသည်တို့။
ယခင်- Stainless Steel Wire Rope ၂
နောက်တစ်ခု: ပလပ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ထားသော သံမဏိကြိုး
China Galvanized Steel Rope ၊
တရုတ်မှထုတ်လုပ်သော Galvanized Steel Wire Rope
Electro Galvanized Steel Wire Rope ၊
လက်ကား Galvanized Steel Cable
သွပ်ရည်စိမ်စတီးလ်ကြိုး သံမဏိ Core 6*7+IWS 6...
Galvanized သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး Fiber core / metal Core
6*37+FC သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဝိုင်ယာကြိုး လွှင့်ထူခြင်း။
ကြိုးခုန်ဝယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခုန်ကြိုး, ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး, ကြိုးခုန်တာ စမတ်ကျတယ်။, ropeless skip ကြိုး, ခုန်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်,